မွတ်ဆလင်တွေကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စခန်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်- ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ
မွတ်ဆလင်တွေကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စခန်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်- ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ 4.5
၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ - ဘီဘီစီမြန်မာတီဗီ
တရုတ်နိုင်ငံက ၀ိဂါ မွတ်ဆလင် ၁ သန်းလောက်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ရှန်ဂျန်းပြည်နယ်တွင်းမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတခုကို တရုတ်အစိုးရ တည်ဆောက်ထားတာကို ဘီဘီစီက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်အစိုးရကတော့ ဒါတွေဟာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆို၊
ဆော်ဒီသတင်းထောက် ဂျမား ဟာရှော့ဂျီကို သတ်ဖြတ်သူလို့ သံသယရှိသူ ၂၁ ဦး ကို အမေရိကန် အစိုးရ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်၊
ယီမင်စစ်ပွဲ အဆုံးမသတ်နိုင်သေးတာကြောင့် ပြည်သူတွေ အငတ်ဘေး ဆိုက်ရောက်တော့မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂပြော၊
ဦးနှောက်ထဲက အကြိတ်ကို မေ့ဆေးပေးစရာမလိုပဲ ကုသနိုင်တော့မယ့် အကြောင်းနဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းဆောင်းပါးတွေကို ရှုစားရဖို့ ရှိပါတယ်။
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #တရုတ် #မွတ်ဆလင် #ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း
၁သန်းကလူနည်းစုလား သန်း၁ထောင်ဖြစ်မှလား Is that 1 Million is minority. When muslim become 1 billion you will call majority.
Author — Phyo Kyaw
Author — Muu York
ကောင်းရင်​ ကောင်းကောင်းဆက်​ဆံမှာပါ ဆိုးလို့ထိမ်းထားတာဖြစ်​မယ်​
Author — Yen Linn
လူကို လူလို့ ဘဲမြင်ပါတယ် ။ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုက က်ိုယ့်ရ့ဲ လက်ခံနိုငိတဲ့ အသိပါ။
ဘာသာတိုင်းမှာ အစွန်းရောက်ဆိုတာ ရှိပါတယ် ။
မကောင်းတဲ့သူကို မကောင်းသလို့ဆဲခွင့်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ငါးခုံမ ၁ ကောင်ကြောင့် တလှေလုံး မပုတ်စေချင်ဘူး။
လူသားတိုင်း ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရတဲ့ ဘာသာတိုင်းမှာ လူသားချင်းစာနာ
မှုက မင်္ဂလာ တပါးပါ ။ အခု မန့် တွေကြည့်ပြီ ဆဲကြပြောကြတာကြီးက
ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ လူတွေအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရသလို့မင်းကော
သူတို့ ကို ထိလို့ နာတာလားဆို ကျတော်မှာ ဖြေစရာတခုဘဲရှ်ိပါတယ်။
ကျတော်ဘယ်သူမဆို ဘယ်ဘာသာမဆို မေတ္တာ ဂရုဏာန့ဲဘဲ ကြည့်
တက်လို့ ပါ ။
Author — Amara xiao
bbcရေ လူသားချင်းတကယ်စာနာတယ်ရင် ထိုင်းမှာမတရားအဖမ်းခံရတဲ့ဝင်း
Author — SAN THAW TAR
Author — Chit Chit Chit Chit
လူနည်းစုမို့တော်တော့တယ် တ ကမ္ဘာလုံး လိုက်မွှေနေတာ
Author — That wai Tun
ကောင်းတာပေါ့ မွတ်ဆင်လင်နဲ့ မြန်မာပြည်က ဖွတ်တွေ ထောင်ထည့်ရောက်သွားတာ
Author — k.vava mara
Author — myanmar myanmar
BBC က ဘယ်သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်လည်း ဆိုတာရှင်းနေတာပဲ
Author — Steven Tun oo
World war lll very nearly now.
Are you ready preparation for law koke taya?
How age are we to say?
How long we can stay in world?
What is our PAN TAI?
Do some thing for tomorrow.
Hope be no late.
Author — Fusion Wide
_မူစလငျ လို့ ချေါပါသညျ။ မှတျစလငျ မဟုတျပါ။ လနျဒနျမှာနပွေီး စာမတတျကွဘူးလား_
Author — Thang Laka
Author — ko junait
BBC, world biggest propaganda machine!
Good job China !!! 👍
ဦးနှောက်ခွဲ စိတ်တဲ့သတင်းကို အရင်ဆုံးပြပြီး
Author — Kangy i
ဒါမျိုးကျတေ့ာ လူ့အခွင့်အရေး မအော်ကြတေ့ာဘူးလား
Author — Lavender Lady
နင်တို့BBCက မွတ့်ဆလင်နဲ့ပက့်သက့်လာရင် ဖင်ပြဲးအောင် လိုက့်ဆက့်စုနေကြတယ်ပါလား
ဘာလို့လဲးဆိုတော့ ငါတို့လဲး တရုတ့်မို့လို့ပဲး....ချသာချ
Author — MG Star
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂ဝ ဇှနျ ၁၂ မနကျပိုငျး)
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၆-၁၈-၂၀၂၀)
အိုင်အက်စ်ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်ရောက်လာပြီလား - ဘီဘီစီ မြန်မာတီဗီ
အစ္စရေးရောက် ထိုင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ အသက်မဲ့ အိမ်ပြန်ခရီး (အပိုင်း ၂)
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၆-၁၇-၂၀၂၀)
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၆-၂၅-၂၀၂၀)
ဟွာဝေး အကြီးအကဲသမီးကို ကနေဒါမှာဖမ်းလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ - ဘီဘီစီ မြန်မာတီဗီ
'တပ်မတော်က သမ္မတ လက်အောက်မှာ ရှိလား' - ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဂျော်နီ